| ဖန်မျှင်ထည်အထည်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ Meshes လီပူး
ဖန်မျှင်ထည် sunshade ထည်လွင်ပြင်နှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ကောင်းသောရာသီ-သငျ့, မှန်မှန်နှင့်ပျော့ပျောင်းသောအရောင်ရှိပါတယ်။ ဖန်မျှင်ထည်ထည်အိမ်, ဟိုတယ်နှင့်နေရောင်ခြည်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ရုံးများများအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ် sunshade ။
အမည် ခံနိုင်ရည်ဖိုက်ဘာမှန်ဇယားကွက်ကွက်အထည်အယ်လကာလီ Lipu ဖန်ဖိုင်ဘာ
မျက်နှာပြင်ကုသမှု PTFE ကုတ်အင်္ကျီ
specification 10mesh မှ 2.8mesh, 160g / m2 မှ 60g / m2, 1 မိန× 50
သြရီဂျင် Anping မြို့, Hebei, တရုတ်
လက္ခဏာ 1. Anti-အိုမင်း, ရှည်သောအသက်;
2. ချေး-ခုခံ, High-ခွန်အားကိုဆန့်ကျင်အိုမင်း, မီးသတ်-performance ကို
ဆန့်ကျင်ငြိမ် function ကိုအတူ 3. မစွန်းပြာ, ဓါတ်ငွေ့-permeable ။
usage High-end ရုံး, လူနေအိမ်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောအဆောက်အဦးများ, မွေးမြူရေးခြံ, ဥယျာဉ်ခြံများအတွက်, သူတို့ဟာအင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်ခြင်ဆန့်ကျင်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်ကြသည်။
ဝါယာကြိုးက DIA 10mesh မှ 2.8mesh
width 1 မိန
အရောင် , အပြာ, (စံ) အဖြူရောင်အဝါရောင်, ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီ
အလေးချိန် 160g / မီတာမှ 60g / m2
ပုံစံ အရွယ်အစား mesh
မီလီမီတာ အရွယ်အစား mesh
ကွက် / လက်မ အလေးချိန်
ဂရမ် / m2 ဆန့အစွမ်းသတ္တိကို
4x4x140g4×46 ×6140 1200 × 1350
4x4x160g4×46 ×6160 1400 × 1350
5x5x145g5×55 ×5145 1500 × 1300
5x5x160g5×55 ×5160 1700 × 1300
10x10x110g 10 × 10 2.5 × 2.5 110 1200 × 1000
10x10x125g 10 × 10 2.5 × 2.5 125 1400 × 1000
10x10x145g 10 × 10 2.5 × 2.5 145 1500 × 1300
12x12x110g 12 × 12 2.5 × 2.5 110 1200 × 1000
12x12x125g 12 × 12 2.5 × 2.5 125 1400 × 1000
2,85 × 2.85x50g 2,85 × 2,859×950 500 × 500
2,85 × 2.85x60g 2,85 × 2,859×960 500 × 550
1. ဓာတုတည်ငြိမ်မှု, Anti-alkaline များ, ဘိလပ်မြေအက်ဆစ်ကိုခံနိုင်ရည်ရေကိုခံနိုင်ရည် rosion-ခံနိုင်ရည်နှင့်အခြားဓာတုချေးခုခံနှင့်ဗဓေလသစ် Bond styrene အတွက်ပျော်ဝင်, ခိုင်မာတယ်။
2. Dimension တည်ငြိမ်မှု, တောင့်တင်းချောမွေ့ခြင်းနှင့်ပုံပျက်သော shrinkage ရန်ခက်ခဲ။
3. High-ခွန်အားကိုမြင့်မားတဲ့ကိန်းပကတိတန်ဖိုး, အလင်းအလေးချိန်
5. Mothproof, မှိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
6. Fireproof, အပူလျှပ်ကာ, အသံ insulator တွင်လည်း။
ဖန်မျှင်ထည် sunshade အထည်အဓိကအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အလှဆင်အတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဖန်မျှင်ထည်ထည်အယ်လကာလီ-ခုခံနှင့်မြင့်မားသောဆန့အစွမ်းသတ္တိ၏ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ် sunshade ။ ဤလူမျိုးသည်အဆင်ပြေခံစားမှုနှင့်အဆင်ပြေဘဝဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
ကော်ဖန်မျှင်ထည် mesh တိပ်
အယ်လကာလီကိုခံနိုင်ရည်ဖန်မျှင်ထည် Grid ပိတ်စ
အယ်လကာလီကိုခံနိုင်ရည်ဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ်
အယ်လကာလီကိုခံနိုင်ရည်ဖန်မျှင်ထည် mesh တိပ်
alkaline ကိုခံနိုင်ရည်ဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ်
ဖန်မျှင်ထည် Net ကအရန်ကူးယူခြင်း
Black ကဖန်မျှင်ထည် Grid ပိတ်စ
နှစ်ချက်ဖွဲ့ Slicone ဖန်မျှင်ထည်တိပ်
အီး Glass ကိုချည်ခင်ဖန်မျှင်ထည်တိပ်
ပိတ်စ Gridding ဖန်မျှင်ထည်
ဖန်မျှင်ထည်ကွက်ပိတ်စ / အထည်အလိပ်
အဆောက်အဦးသည်ဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ်
ကွိဘီးသည်ဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ်
ဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ် / ဆောက်လုပ်ရေး mesh
ဖန်မျှင်ထည်ကွက်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း Net က
ဖန်မျှင်ထည် mesh Net က
Externall အမှတ်တရသည်ဖန်မျှင်ထည် mesh Net က
ကောင်းမွန်သောစေးနှင့်အတူဖန်မျှင်ထည် mesh Net က
ဖန်မျှင်ထည် mesh ခွငျထော
ဖန်မျှင်ထည် mesh တိပ်
ဖန်မျှင်ထည် mesh တိပ် Roll
ပြုပြင်ရေး Cracked သည်ဖန်မျှင်ထည် mesh တိပ်
ဖန်မျှင်ထည် Net က
ပွန်းစားဘီးသည်ဖန်မျှင်ထည် Net က
အမှတ်တရဘုတ်အဖွဲ့သည်ဖန်မျှင်ထည် Net က
ဖန်မျှင်ထည် Net ကအင်းဆက်ပိုးဖန်သားပြင်
Eifs သည်ဖန်မျှင်ထည် Net ကအင်းဆက်ပိုးဖန်သားပြင်
ဖန်မျှင်ထည် Net ကကွက်
ဖန်မျှင်ထည် Ptfe အထည်အလိပ်ပိတ်စ mesh
ဖန်မျှင်ထည်မျက်နှာပြင် Net က
Flame ဟာနှောင့်နှေး Silicon ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ် coated
မြင့်မားသောအပူချိန် Ptfe ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်
မြင့်မားသောအပူချိန် Ptfe ဖန်မျှင်ထည်တိပ်
ပူးတွဲကိုယ်ပိုင်ကော်ဖန်မျှင်ထည် mesh တိပ်
Luobian ဖန်မျှင်ထည် Net က
ဖန်မျှင်ထည် Net ကအရန်ကူးယူခြင်းစကျင်ကျောက်
ပစ္စည်းဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ်
ပုံသွင်း Polystyrene ဘုတ်အဖွဲ့လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု
Neoprene ရော်ဘာဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ် coated
non-Stick Ptfe coated ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်
non-Stick Ptfe ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်တိပ်
Perlite လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု Panel ကို
လွင်ပြင် Weave ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်
Ptfe coated ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်
ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်နှင့်အဝတ် coated Ptfe
ပူး coated ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်
စစ်ကူဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ်
စစ်ကူဖန်မျှင်ထည် mesh ခွငျထော
ခံနိုင်ရည်ဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ်
တင်းကျပ် Polystyrene ဘုတ်အဖွဲ့လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု
ကိုယ်ပိုင်ကော်ဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ်
ဆီလီကွန် coated ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်
silicone coated ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ်
silicone ရော်ဘာဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ် coated
ဖန်မျှင်ထည်အထည်အလိပ် coated Teflon
Teflon ဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ်
မြို့ရိုးအဖန်မျှင်ထည် mesh အထည်အလိပ်
က Wall လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုလက်သည်း
အဖြူရောင်ဖန်မျှင်ထည် Grid ပိတ်စ